PressReader - Ilanga: 2018-10-29 - I-PIRATES YENZE OBEKUNGASAZIWA KWI-DERBY
I-PIRATES YENZE OBEKUNGASAZIWA KWI-DERBY
Ilanga - 2018-10-29 - Ezemidlalo - PHILANI NCALANE
I-ORLANDO Pirates yenze obekungasaziwa kwiSoweto Derby kokuthi ikilabhu engenelwe kuqala yigoli ikwazi ukushaya elokulinganisa iphinde iwunqobe lo mdlalo otha-thwa njengowezinkani zababili.
Selokhu kwagcina ngoNhlangulana (June) wango-1995 ukuthi ikilabhu ikwazi ukubuya ekungenelweni yigoli kuqala kwiSoweto Derby iphinde inqobe. Lokhu kwenziwa yiyo- na iPirates. EZimnyama zikuphindile lokho nangoMgqibelo emdlalweni we-Absa Premiership lapho iKaizer Chiefs ivule khona inkundla ngegoli likaKhama Billiat elingene ngomzuzu ka-15.
IPirates ikwaze ukushaya amagoli amabili yize iqale yashweba iphenathi ngomzuzu ka-25. Le phenathi ithathwe nguJustin Shonga yabanjwa ngqi ngu-Itumeleng Khune.
Amagoli eBucs abhakuziswe ngu-Innocent Maela ngomzuzu ka-29 noVincent Pule ngoka-32.
Umqeqeshi wePirates, uMilutin “Micho” Sredojevic, uthe akethukanga ngebuya labadlali bakhe kulo mdlalo acishe wamelwa yinhliziyo kuwona bengenelwa yigoli.
Lo mqeqeshi ubonge kakhulu ithimba labaqeqeshi, kodwa waqhakambisa kakhulu uRhulani Mokwena ozifake ekukhulumeni ngaphambi kwalo mdlalo ethi ibhentshi leChiefs liyaxega selokhu kushiye uSteve Komphela.
“UMokwena ukhulele eSoweto, ungumfana wenda- wo. Ngiwabonga kakhulu amagalelo akhe. Ngifake noLinda Mntambo ngoba bengibona ukuthi uwulangazelele kakhulu lo mdlalo ngoba naye udabuka khona lapha eSoweto,” kusho uSredojevic.
Nokho-ke inkulumo kaMokwena ibukeke inemba kahle njengoba uGiovanni Solinas ocija iChiefs, evele waqunga isibindi waqalisa uBilliat noLeonardo Castro ababuya ekulimaleni.
Ngesikhathi esenza izinguquko, ukhiphe uBernard Parker onesipiliyoni sokudlala kwiDerby futhi osebenze kanzima egolini likaBilliat, wafaka uHendrick Ekstein.
Nasemuva lo mqeqeshi uqalise maphakathi nenkundla uSiyabonga Ngezana noMario Booysen abangajwayele ukudlala ndawonye.
Laba badlali bebehluleka ukubhekana nokushesha kwabadlali beBucs okubalwa kubona uShonga, u-Augustin Mulenga noPule abavele babaphendula umgwaqo.